लेक्फ्रेड लक्षण कैबिन, जस्तै नयाँ - एक्सएनएमएक्सएक्स एक्सेज विशेष खोजहरू
लेक्फ्रेड लक्षण कैबिन, जस्तै नयाँ - एक्सएनएमएक्सएक्स एकस
घर » सूचीकरण » लेक्फ्रेड लक्षण कैबिन, जस्तै नयाँ - एक्सएनएमएक्सएक्स एकस
नयाँ लेकफ्रेन्ट लग केबिन- 5.85 निजी एकेड जस्तै
आश्चर्यजनक Lakefront Log केबिन Asheville को नजिकै! एक हल्का धुरा पानी, मलबाल, र geese बाट उठ्छ बिहान उठ्यो। सनशाइनले अर्को सुन्दर दिन तालमा डेकमा चिल्लो हटाउँछ। नयाँ लग घरको जस्तै एक सुन्दर पर्वत झील उपेक्षा गर्दछ। यो निजी, गेट गरिएको सेटिङ केवल6एकमुनि अन्तर्गत मा पर्वत कोण संग रसिलो हुन्छ र सानो मात्रामा सफा गरिएको चारा, माउन्डरिंग स्ट्रिम, विशाल ताल पठाउने, आराध्य केबिन शैली गेराज, लामो कस्टम क्यारर्ट, पानीमा हिंड्ने एक पात समावेश गर्दछ। र एउटा भाडा।
भित्र, pinewood सुगंध इन्द्रहरू भरिएको छ। सूर्यलाइटले अमीर पाइन फर्शहरूको युद्ध गर्छ। काँचको ढोका ठूलो ठूलो डेकमा बोल्छन्। यस झ्यालखानाको छेउमा यस झ्यालखानाको लग कक्षको लामो छतले धेरै आन्तरिक लाइटको अनुमति दिन्छ। यस लग घरमा मनोरञ्जन गर्नका लागी महानगरीय पोखरीमा ठूलो ढोका भएको छ, हरेक कोठामा आफ्नै पूर्ण स्नान छ, सिंक र फ्रिज, लेकसाइड ढुङ्गा फायरपिट, ग्याँस ग्रिल, र ठूला पत्थरको पाटोको साथ एक पट्टी छ। खुला रसोईघरमा बारम्बार मर्बलले द्वीप र काउन्टोप्स, स्टेनलेस स्टीलको उपकरणहरू, नरम-नजिकको दराजसहित पर्याप्त पाइन क्याबिनेटरी काम गर्दछ।
यो लग केबिन भाडामा कुनै प्रतिबन्ध छैन!
5.85 एकस, जसमा यो भव्य लग गृह स्थित छ, भाडामा कुनै प्रतिबन्ध छैन। यसले ठूलो छोटो भाडामा भाडा दिनेछ र धेरै सम्भावना एक लोकप्रिय गन्तव्य हुनेछ। सामान अलग देखि उपलब्ध छ! वैसे, यो केवल 12 मिनेट देखि सिएरा नेभाडा ब्रिज!!
यदि तपाइँ अर्को घर वा गेस्ट हाउस थप्न चाहानुहुन्छ भने त्यहाँ एक सेप्टिक प्रणाली हो र तपाईंको खरिद सहित समावेशी धेरै नजिकको एकमा निर्माण गर्न हातमा राम्रो अनुमति छ!
यो गुण तालफ्रेन्ट लग केबिन घर पछि लागेर स्थित छ, मिल्स नदी, केवल 14 मिनेटबाट एशेलो एयरपोर्ट र उत्कृष्ट खरीदारी र रेष्टुरेन्टको छनौट!
बिक्रीका लागि हाम्रो अन्य लग घरहरू हेर्नुहोस्।
"जानकारी मान्य मान्य तर ग्यारेन्टी छैन।"
मूल्य: $ 579,000
ठेगाना: 71 Yonder Trail
शहर: MIlls River
जिप कोड: 28759
निर्माण गरिएको वर्ष: 2011
वर्ग फिट: 2207
पहिलो नाम: *
अघिल्लो सूचीअमेरिकी क्यासल बिक्रीका लागि - क्यास घाटी चाटाउअर्को सूचीबिक्रीको लागि फायर हाउस - YE OLDE FIREHOUSE
अमेरिकी क्यासल बिक्रीका लागि - क्यास घाटी चाटाउ
बिक्रीको लागि फायर हाउस - YE OLDE FIREHOUSE